Woof: ị nwere ike ịmepụta distros nke ugbua dabere na puppy Linux | Site na Linux
Woof: ị nwere ike ịmepụta distros nke ugbu a dabere na Puppy Linux
Ụbọchị ole na ole gara aga, anyị hụrụ otú ike gị onwe gị omenala Ubuntu dabeere distro. Taa, aga m egosi gị otu ị ga - esi wuo nwa nkịta Linux nke sitere na distro.
Uru nke ịmepụta distro omenala dị ọtụtụ, mana ọ bụ naanị na ha nwere ịchekwa oge, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwụnye OS na ọtụtụ igwe. Oge ọ bụla ị rụnyere OS ị ga-amalite wụnye ọtụtụ mmemme na tinye-ons nke ịchọrọ mgbe niile. Yabụ, ịnwe OS nke gụnyere ha na ndabara ga-azọpụta gị ọtụtụ oge.
Dabere na puppy Linux, Wof na-enye anyị ohere imepụta "ihe puppy nke puppy" nke anyị nwere ike tinye ọtụtụ ihe dịka anyị chọrọ ma hazie ya n'ụzọ nke anyị.
Kedu ihe ị ga - eme Woof:
Budata ngwungwu site na nkesa ndị ọzọ ... ee, kpọrọ.
Mee puppy LiveCD zuru oke na akpaghị aka, yana nchịkọta niile ahọpụtara (ọbụlagodi na ha so na distros ndị ọzọ).
Mee ụlọ SFS n'ụzọ zuru ezu "devx" na-akpaghị aka (nke bụ otu puppy si enye nkwado maka mkpokọta na C / C ++ / Vala / Genie / Fortran).
Na-akwado ọtụtụ nkesa.
Obere ihe omume a di mfe imelite.
Ihe si na njedebe bụ omenala puppy Linux.
Ihe omume a magburu onwe ya, nke onye okike mbụ nke Puppy Linux (Barry Kauler) dere, nwekwara interface interface nke na-eme ka ọ dị mfe iji, ọkachasị maka ndị na-abanye ụwa nke Linux na iwu.
Ihe kwesiri iburu n'uche bu na ntughari nke anyi kwenyere na ha ga - adabere na puppy Linux, nke na - agbanwe ha na ngwa ngwa nke na - eri obere ohere disk na obere obere RAM n'enweghi oru ma obu nlele anya.
M na-atụ aro na tupu ịmalite igwu egwu a na ihe ijuanya, akpa-agụ nke ọma ntuziaka maka ojiji na nwụnye.
Download Nwa nkita
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Woof: ị nwere ike ịmepụta distros nke ugbu a dabere na Puppy Linux
Ndewo, anyị bụ ndị otu ụmụ akwụkwọ ma anyị chọrọ ịkesa nkesa Linux anyị.
Ndi enwere ike inweta modnet USB pirelli modem ka ọ rụọ ọrụ na PUPPY?
You chọrọ ịma ihe Ubuntu 10.10 ọhụrụ ga-adị?
Linux kernel nwere ihe ndị na-abụghị "n'efu" ...